बा मारेर आमा जेल जानुभो, साता नबित्दै हजुर आमाले नि छोडिन् ! | Sourya Daily
बा मारेर आमा जेल जानुभो, साता नबित्दै हजुर आमाले नि छोडिन् !
काभ्रे । ‘भगवान् तिमी साँच्चै छौ भने मेरो भागमा अझै पीडा थपिदेऊ ! जो पीडामा थलिएको छ उसैलाई थिचिदिएर तिमीले के पाउँछौ ? उनीहरूको भागका पीडा सार्न मिल्ने भए मेरो नाउँमा गरिदेऊ अबोध, अनाथलाई किन यति साह्रो पीडामाथि पीडा थप्छौ ।’ ईश्वरसँग यस्तै पुकार्दै थिए काभ्रे पनौतीका आइत तामाङ । उनि घरी साना भतिजा भतिजीको टाउको सुमसुमाउँदै बर्बराउँदै गर्दा लाग्थ्यो त्यहाँको अशान्तिप्रति स्वयं भगवान् पनि खुसी छैनन् ।
आमाले बा मारेर जेल गइन् । त्यसको साता पनि नबित्दै सोही परिवारमा यतिबेला अर्काे पीडा थपिएको छ । ८० वर्षीय हजुरआमा कान्छी माया तामाङ पनि छोरा सन्तबहादुर बितेको साता नबित्दै संसारबाट बिदा भइन् । कहिलेकाँही भगवान् पनि नियति बनेर खडा हुन्छन्, भगवान् नै छन् या छैनन् ? प्रश्न बनेर खाली आइत बहादुरको मस्तिष्कमा डेरा जमाएर बसेको छ ।
ठूलाबाको शरणमा रहेका यी दुई अबोध दाजु बहिनीको लालनपालनको जिम्मेवारी थपिएको छ । दिनभरि ज्याला मजदुरी गरी बेलुका के खाने भन्ने अवस्था गुजार्दै आएका आइत सञ्चारकर्मी पुग्दा केही आशाको नजरमा आफ्नो पीडाको भारी पोखे । भूकम्पपछि आफ्नै परिवार पाल्न संकट परेको मलाई अब थप बिपत्ति आएको छ । मन सम्हाल्न नसकेर सुकसुकाउँदै आफ्नो परिवारका पीडा एक–एक कोट्याएर पहरा फोरेझैं निकाल्ने प्रयत्न गर्छन् तर, सम्हालिन सक्दैनन् । उनले परिवारबारे सुनाउँदै भने, ‘परिवारमा साना दुई लालाबाला छन् तर, तिनीहरूको भरणपोषण गर्ने अब कोही छैनन् । म अहिले आमाको किरिया बसेको छु ।’
आफ्नो घरको त्यो भयानक दृश्य देखेकी छोरी अरुणा र सुरेन्द्र एकोहोरो टोलाउँदै आखाबाट आँसुका बलिन्द्र अविरल बगाउँदै बसेका छन् । आमाको नामसमेत सुन्न नचाहने छोरा सुरेन्द्र भन्छन् स्कुल जाने पढेर डाक्टर बनेर घाउ सफा गर्न मन छ । तर, अपसोच उनी अब त्यो सपना खाली आशामा परिणत मात्र बनेको छ । उनका ठूलाबाको भनाइमा कसैले उनीहरूलाई दया गरे पढ्न पठाउने थिएँ । यतिबेला यो विचल्लीले वरपर गाउँका स्थानीयमा पनि एक किसिमको सन्नाटा छाएको छ ।
गत बिहीबार काभ्रेको पनौती–२ स्थित एक श्रीमतीले आफ्नै श्रीमान्को हत्या गरेकी थिइन् । पनौती नगरपालिका–२ स्थित ठाडेमा श्रीमान्को हत्या गरेर भागेकी २६ वर्षीय लालुमाया तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको थियो । ३१ वर्षका उनकै श्रीमान् काले भनिने सन्त बहादुर तामाङलाई हत्या गरेकी लालुमाया र सन्तका एक ८ वर्षका छोरा सुरेन्द्र तामाङ र ५ वर्षकी अरुणा तामाङ रहेकी थिइन् । लालुमायाले प्रहरीमा आपूmले नै घरयासी विवाद हुँदा पतिलाई खुर्पाले हान्दा मृत्यु हुन पुगेको स्विकारेकी थिइन् ।